Misaintsaina ny Teniny
“Endrey ny fitiavako ny lalànao! Fisaintsainako mandrakariva izany” Sal. 119:37
Tsy ilaintsika ny tara-pahazavana mitsilopilopy avy amin’ny fomban-drazana sy fanaon’ny olona mba hampahazava ny Soratra Masina. Raha izany dia azo ekena fa mila ny taratra mitsilopilopy alefan’ny jiro fanao am-paosy avy ety an-tany ny masoandro mba hampitombo ny famirapiratany. Natao mazava ny adidy rehetra, mora azo ny lesona rehetraao amin’ny Baiboly. Ny fanomezana avy amin’i Kristy sy ny tsilon-tsaina avy amin’ny Fanahy Masina no manambara amintsika ny Ray . Mampahendry ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny tanora ho amin’ny famonjena ny Teny.
“Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana , ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra” 2 Tim. 3:16,17. Tsy misy boky mafonja manandratra ny fisainana , manome tanjaka ny fahaiza-manao tahaka ny fahamarinana midadasika sy manandratra ao amin’ny Baiboly. Raha ianarana araka ny tokony ho izy ny Tenin’Andriamanitra , dia hanana ny fivelarana ara-tsaina sy ny fahatsaran-toetra ary ny fahamasinan’orin’ny fikasana izay tsy fahita amin’izao androntsika izao ny olona.
Bitika ny tombontsoa azo avy amin’ny famakiana vonjy tavan’andro ny Soratra Masina. Mety ho misy mahavoavaky ny Baiboly iray manontolo, saingy tsy mahita ny hatsarany na mahatakatra ny halalin’ny heviny izy. Ny andininy iray nodinihina mandra-pahazavan’ny heviny ao an-tsaina sy ny fifandraisany amin’ny drafitry ny famonjena dia manana tombam-bidy lehibe noho ny famakiana toko maro tsy misy tanjona hotratrarina mazava sy fampianarana tsara azo. Aza misaraka amin’ny Baibolinao ianao. Raha vao misy fotoana, dia vakio izany; tadidio ireo andininy. Na eny am-pandehanana eny an-dalana aza, dia mety ho afaka mamaky andininy iray sy misaintsaina izany ianao, ary mitahiry izany ao an-tsaina.
Tsy tokony hodinihina tsy amim-bavaka na oviana na oviana ny Baiboly. Alohan’ny fanokafana ireo takila, dia tokony hangataka fahazavana avy amin’ny Fanahy Masina isika, ary homena antsika izany. Rehefa nankeo amin’i Jesosy i Natanaela dia hoy Jesôsy “Indro ny tena Isirely tsy misy fitaka” Jao. 1:47. Hoy Natanaela taminy: “Ahoana no ahafantaranao ahy?” Dia namaly i Jesôsy ka nanao taminy hoe: “Fony tsy mbola niantso anao Filipo, dia hitako teo ambanin’ny aviavy hianao.” Fa hahita antsika ao amin’ny toerana mangina fivavahana koa Jesôsy, ary raha mangataka Aminy fahazavana isika, dia hahafantatra ny fahamarinana. Homba izay mikatsaka ny fitarihan’Andriamanitra amim-panetren-tena ireo anjelin’ny mazava. AUG, 9 Jona 1909.